Topnepalnews.com | कहाँ खर्च भयो दाताको ४० अर्ब ? ऋण बढ्यो, अनुदान घट्यो
कहाँ खर्च भयो दाताको ४० अर्ब ? ऋण बढ्यो, अनुदान घट्यो
Posted on: May 03, 2016 | views: 326
काठमाडौं,बैशाख १३ । दातृनिकाय तथा आइएनजिओले आफूखुसी खर्च गर्ने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० अर्ब रुपैयाँ एनजिओ–आइएनजिओले आफूखुसी खर्च गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष विभिन्न दातृनिकायले उपलब्ध गराएको सहायतामध्ये ३० अर्ब यसरी नै खर्च गरेका थिए । दाताको एक खर्ब १३ करोड मध्ये ७० अर्ब बजेट प्रणालीमार्फत खर्च भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
ऋण बढ्यो, अनुदान घट्यो
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार दातृनिकायले उपलब्ध गराएको ऋणको अनुपात पनि बढेको छ । गत वर्ष उनीहरूले उपलब्ध गराएको सहायतामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै ऋण थियो । यस वर्ष ऋणको अनुपात बढेर २४ प्रतिशत पुगेको छ । यस वर्ष सरकारले २५ करोड डलर ऋण लिएको छ । गत वर्ष कुल सहायताको ६६ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएकोमा यस वर्ष अनुदान घटेर ५८ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले ५९ करोड डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
बहुपक्षीयमा विश्व बैंक द्विपक्षीयमा बेलायत अगाडि
सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने बहुपक्षीय निकायमा विश्व बैंक समूह छ । उसले नेपालमा १८ करोड ८१ लाख डलर सहयोग गरेको छ । विश्व बैंकपछि एसियाली विकास बैंक दोस्रो स्थानमा छ । उसले १४ करोड ७८ लाख डलर नेपालमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्विपक्षीय निकायमा धेरै सहायता उपलब्ध गराउनेमा बेलायत रहेको छ । बेलायतबाट १६ करोड ८० लाख डलर सहायता नेपालमा प्राप्त भएको छ । यस्तै, अमेरिकी विकास कार्यक्रमबाट नेपालमा १३ करोड २३ लाख डलर सहायता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
एनजिओमध्ये सेभ द चिल्ड्रेन अगाडि
नेपालमा कार्यरत झन्डै तीन सय गैरसरकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै रकम सेभ द चिल्ड्रेनले खर्च गरेको छ । उसले दुई करोड ९० लाख डलर खर्च गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले दातृनिकायबाट उपलब्ध रकम विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । दोस्रोमा वल्र्ड भिजन छ । उसले एक करोड २३ लाख डलर नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा खर्चंदै आएको छ । गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ३१ वटा छन् । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमा २४, बर्दिया र ललितपुरमा १८–१८ तथा बाँकेमा १७ वटा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम मनाङबाहेक देशका ७४ जिल्लामा सञ्चालित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मध्यमाञ्चलमा सबैभन्दा धेरै खर्च
गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त सहायतामध्ये मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको छ । मध्यमाञ्चलमा २६ करोड २४ लाख डलर खर्च भएको उल्लेख छ । यस्तै, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १२ करोड, मध्यपश्चिमाञ्चलमा १० करोड, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ९६ लाख तथा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ९५ लाख डलर खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सहायता
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट सहायता स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको छ । स्वास्थ्यमा १७ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । यो रकम कुल सहायताको १७.४१ प्रतिशत हो । यस्तै, दोस्रो स्थानमा स्थानीय विकास छ । स्थानीय विकासमा १२.२३ प्रतिशत सहायता खर्च भएको छ । गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सहायता खर्च भएको थियो । यस वर्ष शिक्षा क्षेत्र तेस्रो स्थानमा छ । शिक्षामा ११.१३ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ३६ लाख डलर खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युनिसेफद्वारा आफूखुसी दुई अर्ब खर्च
गैरसरकारी संस्था तथा दातृनिकायले बजेट बाहिरबाट ६९ वटा कार्यक्रममा खर्च गरेका छन् । बजेट बाहिरबाट सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) छ । युनिसेफले एक करोड ७० लाख डलर अर्थात् करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आफूखुसी खर्च गरेको छ । उसका ११ मध्ये पाँचवटा कार्यक्रम बजेट बाहिरका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास साझेदार प्रतिवेदन २०१४र०१५ अनुसार राष्ट्रसंघीय महिला विकास कार्यक्रम (युएन वुमन) ले नेपालमा सञ्चालन गरेका ३० वटै कार्यक्रममा बजेट बाहिरका हुन् । उसले आठ लाख डलर अर्थात १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै यसरी खर्च गरेको छ । नेपालमा नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डलगायतका देशबाट प्राप्त सहयोग पनि बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम ९एफएओ०, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्था ९जाइका०बाट प्राप्त सहयोग पनि बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट नै खर्च भएको छ ।
किन हुन्छ बजेट बाहिरबाट खर्च ?
बजेट प्रणालीबाट खर्च गर्नुपर्दा गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारीसरह कानुनी बन्धनमा बस्नुपर्छ । उनीहरूले गर्ने ठेक्कापट्टा तथा खर्च सबै सरकारी नियमअनुसार नै हुन्छ । तर, बजेट बाहिरबाट खर्च गर्दा उनीहरू आफैँले मनलागे जसरी खर्च गर्न पाउँछन् ।